Diyaarad hub iyo rasaas ku raran yihiin oo lagu qabtay garoonka Muqdisho – Warfaafiye:
Diyaarad hub iyo rasaas ku raran yihiin oo lagu qabtay garoonka Muqdisho
Ali Mohyadin Oct 12, 2017 0
Diyaarad siday saanad milateri ayaa lagu qabtay garoonka diyaaraddaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Diyaaradan oo ah mid xamuul oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaan lagu wargelin maamulka Garoonka, iyadoo shaki ka dhashay xamuulka ay sido diyaaradan kadib baaritaan lagu sameeyay lagu arkay qalab iyo gaadiid.
Mamulka Garoonka ayaa sheegay inay diyaaradda saaran yihiin laba Gaari oo ah kuwa aanay rasaastu karin, Qoryo kala duwan oo Boobayaasha culus iyo kuwa fudud isugu jira, Bistoolado, rasaas iyo jaakadaha laga xirto rasaasta.
Saraakiil ka socota Safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho ayaa tegay garoonka iyagoo sheegtay inay leeyihiin Saanadda ay sido rasaasta, isla markaana ay doonayaan in lagu wareejiyo, waxaana socda waanwaan arrintan ku saabsan.
Talyaaniga oo ciidamo kooban ka joogaan Soomaaliya ayaa wararku sheegayaan in hubka iyo saanadda uu la yimid Muqdisho aanay ka war heyin maamulka garoonka iyo dowladda Soomaaliya, taasoo keentay in la xayiro diyaaradda siday xamuulka.